မြတ်လေးငုံ: တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့သော တပ်မတော်ဆိုသည်မှာ။
တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့သော တပ်မတော်ဆိုသည်မှာ။
နေ့ စွဲ။ ၂၉-၁၂-၁၉၄၄။
အချိန်။ ၃၊ ၃၀ နာရီ။
ကျွန်ုပ်တို့ တပ်မတော်သည် မည်ကဲ့သို့ တပ်မတော်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို တိုင်းသူပြည်သားအများအား သေချာစွာ သိရှိနားလည်စေရန် အောက်ပါအချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ရပေကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့ တပ်မတော်အား ကျွန်ုပ်တို့ သည် အောက်ပါ ညွန်ကြားချက်အမိန့်များကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ အစကနဦးကပင် ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ညွန်ကြားချက်ထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အောက်ပါအချက်များကို အများပြည်သူတို့သိရှိရန် ဖေါ်ပြလိုက်ပေကြောင်း။
ငါတို့ တပ်မတော်သည် ပြည်သူများမှ ဖြစ်ပေါ်လာ၍ ပြည်သူများ၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ငါတို့တပ်မတော်သည် ပြည်သူ့ တပ်မတော် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများနှင့် ကွဲပြားနေ၍ ပြည်သူများ၏အကျိုးကို ကာကွယ်ရင်း မရှိသော တပ်မတော်မျိုးမဟုတ်၊ ပြည်သူ့ တပ်မတော်သည် ပြည်သူများတွင် အခြေခံ၍ ပြည်သူများနှင့် အဆက်ဖြတ်ကာ ကွဲပြားခြားနားခြင်း မရှိ၊ အမြဲဆက်စပ်နေ၍ ပြည်သူများနှင့် တသားတည်းရှိသည်၊ ပြည်သူ့ တပ်မတော်သည် ပြည်သူတို့ ၏ လက်ရုံးလက်သီး ပြည်သူများ၏ ဓါးသွား ဖြစ်စေရမည်။ ထို လက်ရုံး၊လက်သီး၊ ဓါးသွားသည် ပြည်သူများ၏ ရန်သူကို တွန်းလှန်ရန် ဖြစ်သည်။ ထိုလက်ရုံး၊ လက်သီး၊ ဓါးသွားသည် ပြည်သူများ၏အကျိုးကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့် ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားများဖြစ်ကြသော ရဲဘော်တို့ ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားပီပီ အောက်ပါအချက်များကို ကျင့်ကြံရမည်။
(၁)။ ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ အား အရာရှိ၊ အရာမဲ့ ၊ လူကြီး လူငယ်၊ ယောင်္ကျား မိန်းမ လူမျိုးဘာသာမရွေး ဆက်ဆံတတ်ပါစေ၊ ဖေါ်ရွေကြပါ၊ ယဉ်ကျေးကြပါ၊ ကိုယ့်အမှား မရှိပါစေနှင့်၊ တရားမျှတကြပါ၊ ကြင်နာကြပါ၊ လေးစားကြပါ။
(၂)။ ကိုယ်နှင့်မဆိုင်တဲ့အခြားသူ၏ အလုပ်ကို အနှောင့်အယှက် မပြုပါနှင့်၊ သို့ သော် ကိုယ့်ဝတ္တရားအချိန်တွင် မည်သူမဆို ကူညီနိုင်သမျှ ကူညီပါ၊ ကူညီရာတွင် တရားနည်းလမ်းကျပါစေ။
(၃)။ ဗမာမဟုတ်သော နိုင်ငံတွင်းရှိ လူမျိုးစုများကို ငါတို့ တပ်တွင်၎င်း၊ ပြင်ပသော်၎င်း၊ ဆွေမျိုးရင်းချာကဲ့ သို့သဘောထားပါ၊ ၄င်းတို့ အလေ့အထ ဘာသာအတိုင်း ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ ၀တ်စားနေထိုင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ ကို မကဲ့ ရဲ့ ပါနှင့်၊ မနောက်ပြောင်ပါနှင့်၊ မနှောင့်ယှက်ပါနှင့်၊ ၄င်းတို့ မခံချင်မည့် အပြောအဆို အသုံးအနှုံးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ၊ ၄င်းတို့ ကို ကူညီနိုင်လျင် ကူညီပါ။
(က) အရက်မူး မရမ်းကားရ၊
(ခ) မိန်းမများကို ကျူးလွန်စော်ကားခြင်း မပြုရ။
(ဂ) လုယက် မခိုးဝှက်ရ။
(ဃ) တည်းခိုသောအိမ်ယာများတွင် ခွင့်တောင်းပြီးမှ ၀င်ရမည်။ နေထိုင်စဉ်အခါ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း မနေထိုင်ပဲ သန့် သန့် ရှင်းရှင်း နေထိုင်ရမည်။ အိမ်မှ ထွက်ခွာသောအခါတွင်လည်း အပျက်အစီးများရှိက မိမိကြောင့်ဖြစ်လျင် အစားထိုးပေးခြင်း၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း ပြုရမည်။
(င) တန်ရာတန်ဘိုးမပေးပဲ မ၀ယ်ပါနှင့်။
(စ) ချေးငှားထားသောအရာကို ဆက်ဆက်ပြန်ပေးပါရန် မမေ့ပါနှင့်။
(ဆ) အထက်အမိန့် မရပဲ ပစ္စည်းအတင်းမသိမ်းပါနှင့်၊ အထက်အမိန့် အရ သိမ်းရစေကာမူ မဖွယ်မရာ မယဉ်မကျေးမပြုပါနှင့်၊ အများမခံနိုင်အောင် မလုပ်ပါနှင့်။
(ဇ) လူမျိုးအချင်းချင်း၎င်း၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာရေးနှင့် ပါတ်သက်၍၄င်း၊ သွေးကွဲသည့် အလုပ်၊ မုန်းတီးစေမည့်အလုပ်ကို မလုပ်ပါနှင့်။
အထက်ပါအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့ တပ်မတော်အား စည်းကမ်းများ ပြုလုပ်ပညပ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ သော်လည်း တချို့ တချို့ သော တပ်မတော်သားများသည်၎င်း၊ တပ်မတော်သားများ အယောင်ဆောင်ကြသော အရပ်သားများသည်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ရွယ်ချက်ဝါဒ စည်းမျဉ်းနှင့် ဆန့် ကျင်၍ ပြုလုပ်နေကြပုံကို ကျွန်ုပ်တို့ရံဖန်ရံခါ ကြားသိရပေကြောင်း။ ထိုကဲ့ သို့ အမှူကိစ္စမျိုးကို ကြားသိရသော ပြည်သူအပေါင်းတို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့ အား သိရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် လာရောက်အကြောင်းကြား တိုင်ကြားစေလိုကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့ တပ်မတော်သည် အဓမ္မနှိပ်စက်ခြင်း၊ သွေးစုပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်အခါမျှ ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိ၊ ထိုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဆန့် ကျင်သော မည်သူကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့ အား လာရောက်တိုင်ကြားက ကျွန်ုပ်တို့အရေးယူနိုင်သူမှန်သမျှကို ထိရောက်စွာ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့ အတိအလင်း ကြေညာလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးနှင့် ထိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဒင်ပြည့် တည်တံ့စေအောင် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သော မျိုးချစ်တပ်မတော် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး လွတ်လပ်ရေးကို ရွှေဒင်္ဂါး အစရှိသော ကိုယ်ရေးသက်သာမှူကလေးများအတွက် မည်သည့်အခါမဆို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လဲယူမည် မဟုတ်ကြောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤနိုင်ငံ၊ ဤလူမျိုးများ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးအတွက် အဆုံးထိ တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။ တိုင်းသူပြည်သားများအား တိတိလင်းလင်း ကြေညာလိုက်ပေကြောင်း။
(တပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအစဉ်အလာကို ညှိုးမှိန်စေရုံသာမက ပြည်သူကို ပြန်သတ်သော သတ်မတော်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိစေခဲ့သော၊ ပြည်သူနှင့် တပ်မတော်ကို သွေးခွဲဖြိုဖျက်ခဲ့သော၊ တပ်မတော်ကို လက်ကိုင်ဒုတ်တပ်အဖြစ် ကျင့်သုံးလျက်ရှိနေသော အာဏာရူး သန်းရွှေ သိန်းစိန်တို့ ၏ မတရားသော အမိန့် များကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်နေကြသည့် တပ်မတော်သားများအား မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီးကို စတင်တည်ထောင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သူ စစ်သေနာပတိ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ဆိုတာ မည်သို့ သော တပ်မတော်ဖြစ်သင့်သည် မည်သို့ သော တပ်မတော်သား ဖြစ်သင့်သည်ကို သိရှိကြစေရန်အတွက် အထူးရည်ရွယ်ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်)။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, July 16, 2011
▼ 07/10 - 07/17 (34)
အစ်မက လိမ်ပြောတာကိုး ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ပထမ ရက်ပေါင်း (၁၀၀)
တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြောကြား...
The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြစ်...
ယူကြဦးမလား...ဟောဒီက အလွတ် ၂ ကျပ်တိုး..
၀ါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာ အခါတော်နေ့ 
ကျောက် စရစ်ခဲတွေ အန်ထုတ် နေတဲ့ မကွေးမြို့က ကျောင်း...
ဦးသန်းရွှေ ၊ဦးသိန်းစိန်တို့ အတွက် မူလတန်းစာအုပ်ပါ...
အာဇာနည်နေ့ မှ ပေးသော သင်ခန်းစာများ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ စာပေလက်ရာ
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို တွေ့ချင်လွန်းလို့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စီးပွားရေး လျပ်တပြက် ရုပ်ပုံလ...
The Global And Mail က ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့ က ထုတ်ြ...
ဦးအောင်ဆန်း ဓာတ်ပုံ ဘယ်သူ ပိုင်သလဲ ?
ဦးနု ပြောတဲ့ ဦးအောင်ဆန်း
နောက်ဆုံး ပြောသွားသည့် ဗိုလ်ချုပ် မိန့်ခွန်း
သခင်တင်မြ ပြောပြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ...
ရဲတံခွန် ကမ်းလွန်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့မြေတွင် လုပ်ငန်းသုံး...
(၆၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ.... မိန့်ခွန်း.....
ဒေါ်မေလှမြိုင် သီဆိုထားသော အလေးပြုပါတယ်..
ဝင်းဦး သီဆိုထားသော သတိရပါတယ်..
စိန်ပါတီ သီဆိုထားသော ပြည်သူ့ မျက်ရည်
ဝင်းဦး သီဆိုထားသော အာဇာနည်..
ကိုမြကြီး သီဆိုထားသော.... ဗိုလ်အောင်ဆန်း ..
ဗမာတိုင်း သွေး၊ သတ္တိ၊ ဇွဲ ပြရန် အချိန် [ဗိုလ်မှူြး...
၁၉၄၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၂ရက်နေ့ ညနေ ၇နာရီ၊ ၁၅မိန...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ကျဆုံးခဲ့စဉ်က စာနယ်ဇင်း မှ...
စပီကာဦးမြင့် ဟောပြီးပြောပြီးမှ NLD ကို ချေမှုန်းတေ...